मुस्लिमहरुले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » मुस्लिमहरुले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ
मुस्लिमहरुले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ
SAHARA TIMES Monday, April 20, 20200No comments
अरु समयमा मस्जिद, मदरसामा को , कहाँ, कसरी आए खासै कसैले चासो लिएको थिएनन्। तर जुन परिस्थिति छ त्यो असाधारण छ । नयाँ पुस्ताका मुसलमान युवा तथा अग्रगामी सोचका बुद्धिजीविहरुले सोच्नैपर्ने समय आएको छ, कठमुल्लाहरुका पछाडि हिड्नअघि सय पटक विचार गर्ने कि नगर्ने ?
हामी जस्ताले कहिल्यै हिन्दू चरमपंथीहरुको अमानुषिक सोचलाई सही थापेनौ । तर पर्सादेखि सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरंगमा जुन कोरोना कनेक्सन देखियो त्यो अत्यन्त चिन्ताजनक छ । रोगले कुनै जात, धर्म, सम्प्रदाय देख्दैन । साउदी अरबले कोरोना संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दे जब मक्का मदिना बंद गर्नसक्छ भने भारत, नेपालले मस्जिदमा मास इंट्री किन स्थगित गर्न सक्दैन ?
तब्लिगीबालाहरुले दिल्लीमा जसरी रिएक्ट गरे त्यो रिएक्सनरी छ । धर्म र विज्ञान दुवै अलग चीज हुन् । अल्लाह, ईश्वर, गडले नै सबथोक गर्ने भए सारा अस्पताल, सारा औषधालय, सारा रिसर्च बन्द हुनुपर्थ्यो ।
यो सत्य हो भाया हिन्दुस्तान र हिन्दुस्तानी मीडिया नेपालका हिन्दू नयाँ पुस्तामा पनि कट्टरता बढ्दो छ तैपनि हिन्दू बुद्धिजीवीहरुमा प्रायस कट्टरता विरोधीहरु नै छन् ।
जबकि मुस्लिम दाजुभाईहरुमा अलि कुरा बुझ्नेहरुमा पनि लीपापोती गर्नैहरु नै बढी छन् । मुस्लिम युवाहरु कठमुल्लाहरुको पछि कुद्ने क्रम रोकिएको छैन । अन्यथा यस्तो गम्भीर समयमा नेपाली मुस्लिमहरुसमेत तब्लिगीवालाहरुको स्टन्टमा सामेल हुने थिएनन ।
मानीलिऊँ त्यो गल्ती थियो । तर कोरोना मामूली रोग होइन, यसले कसैलाई बाँकी राख्ने छैन । यो थाहा पाएर पनि त करेक्सन गर्नुपर्थ्यो नि । एउटा अवसर थियो तब्लिगी भेलामा नेपाल कनेक्सनको खबर आएपछि सेल्फ डिक्लिएरेसनमा जान । एउटा अवसर थियो, सेल्फ क्वारेंटाइनमा जान । यो थाहा पाएर पनि मस्जिदमा लुक्नु वा लुकाउनु अक्षम्य अपराध हो ।
अहिले मेरो जिल्ला सुनसरी र मोरंगमा मात्र 91 जना संक्रमित भएको खबर छ । उनीहरु जोगबनी विराटनगर दुहबी सप्तरी हुँदै उदयपुर आए । कतिको सम्पर्कमा बसे, अन्य कतिलाई सारे ट्रेसिंगबाट थाहा होला । तर के यो स्पष्ट छैन यो मूर्खता हो, हेलचक्र्याई हो ? यो मानवताविरुद्ध अपराध हो ।
मलाई दुख लाग्दछ, बाहिरी मानिसले जोखिम ल्याउनसक्छ यो जान्दा जान्दै स्थानीयहरुले किन विदेशीहरुबारे चासो लिएनन ? किन गम्भीरता देखाएनन ? हामीजस्तो गरिब देशमा यो संक्रमण मासमा गयो भने के हुन्छ सोचेका छौं ? सर्व विनाश ।
मदरसा, मस्जिदलाई अब यसै छाडा छाड्नु हुन्न । कडा रेगुलेसन जरुरी छ भन्ने सोच समाजमा आइरहेको छ । तर यसको अर्थ भारतमा जस्तो धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने ,पाशविक रिएक्सनमा जाने स्थिति आउनु दिनुहुन्न । बेस त के हुन्छ भने मुस्लिम विद्वत वर्गले नै इनिसिएसन लिनुपर्छ, एउटा सशक्त म्यासेज दिनसक्नुपर्छ ।